Hindiya: Qodobo muhiimad weyn u leh xiriirka Maraykanka iyo India: Ergeyga cusub ee India ee Washington India News - TELES RELAY
TECH & FIINTA
ACCUEIL » International Hindiya: Kalluumeysatadu waxay muhiimad weyn u leedahay xiriirka Mareykanka iyo India: Ergeyga Cusub ee Hindiya ee Washington India News
Hindiya: Qodobo muhiimad weyn u leh xiriirka Maraykanka iyo India: Ergeyga cusub ee India ee Washington India News
WASHINGTON: Madaxwaynaha Maraykanka Donald Trump ayaa muhiimad weyn u leh xiriirka labada wadan ee India iyo Mareykanka, ayuu yidhi Safiirka cusub ee India guriga, Harsh V Shringla .
Shringla, oo timid halkan Janaayo 9, ayaa jimcihii ku soo bandhigay aqoonsigiisa diplomaasiyadeed ee madaxweynaha Maraykanka ee xafiiska Aqalka Cad.
Isagoo tixgelinaya kalsoonida sii kordhaysa iyo diirada u dhexeeya Hindiya iyo Mareykanka, Hindisaha cusub ee Hindiya wuxuu soo bandhigay shahaadadihiisa si uu u yareeyo saacadaha 50 kadib markii uu yimid Washington.
xaflad degdeg ah noocan oo kale ah diblomaasi shisheeye waa dhif in caasimada Maraykanka, sidii waagii hore, wafdiyada ka yimid wadamada kale, oo ay ku jiraan Hindiya, ayaa la sugayay toddobaad si rasmi ah u siinay aqoonsigooda si ay u Madaxweynaha USA.
Aqoonsiga Dibloomada waa warqad si rasmi ah u magacaaba diblooma safiir u ah wadan kale. Warqadda ayaa laga soo xigtey hal madax oo dawlad kale ah. Waxaa soo bandhigay safiirka madaxa madaxtooyada ee munaasabadda rasmiga ah.
Munaasabadda ayaa sidoo kale calaamad u ah bilowga xilliga rasmiga ah ee xilalka safiirka.
Isagoo ka hadlayay Shahaadooyinka Aqoonsiga, wuxuu sheegay in Trump ay soo baxeen shirkado aad u ballaadhan oo ay labada wadanba is-dhaafsadeen, ma ahan oo keliya labada dhinac, laakiin sidoo kale waxay noqonayaan lamaanayaal istiraatiiji ah oo la xidhiidha gobolka iyo meelaha horumarineed. danaha guud, oo ay ka mid tahay aragtida. oo ka tirsan gobolka Indo-Pacific oo ay hoggaaminayeen hoggaamiyeyaasha labada waddan intii lagu jiray booqashada Ra'isul Wasaaraha Narendra Modi bishii June 2017.
Ergeyga cusub ee India ayaa sheegay in uu la yaabay xadka ay gaareen horumarka ay samaysay xiriirka Mareykanka iyo India sanadihii ugu dambeeyay.
Waa arrin muhiim ah oo aan horay loo arag, ayuu yiri.
Xubin ka tirsan Adeegga Dibadda ee Hindiya tan iyo 1984, Shringla waa danjiraha ugu da'da yar India ee Maraykanka. Waxa uu ahaa guddoomiyaha sare ee India ee Bangladesh ilaa horraantii toddobaadkan, ka hor inta aanu bedelin Navtej Singh Sarna, oo ka fariistay December 31.
Arday ka qalinjabisa kulliyadda St. Stephen's College ee Delhi, Shringla waxay ku hadlaan Faransiis, Vietnamese iyo Nepali marka laga reebo luuqadaha Ingiriiska iyo Hindida.
Intii lagu guda jiray sanadihii 35 ee xirfadlaha diblomaasiyadeed, wuxuu ku qabsaday meelo kala duwan oo ku yaal New Delhi iyo dibedda.
Marka laga soo tago inuu ahaa guddoomiyaha sare ee India ee Bangladesh, waxa kale oo uu ahaa danjiraha Thailand. Shringla wuxuu sidoo kale u adeegay Faransiiska (UNESCO), Hantida joogtada ah ee India ee Qaramada Midoobay ee New York, Vietnam (Hanoi iyo Ho Chi Minh City), Israel iyo Koonfur Afrika.
Switzerland: Loogaga soo horjeedo, LAT waxay ku filan tahay inay joojiso dabka
Switzerland: Jahawareer wadada u dhexeeya Sisikon iyo Flüelen
Hindiya: Ayushman Bharat, CEO, ayaa sheegaysa in wax ka badan 12 lakh dadka ka faa'idaysteen daaweyn lacag la'aan ah oo qayb ka ah barnaamijka | India News
Reggie Fils-Aimé oo ka tagay Nintendo oo Mareykanka ah, Doug Bowser ayaa noqon doona bedelkiisa
Daboolka Laurent Gerra ee 22 Febraayo 2019 - VIDEO
Youtube: WACS. Strasbourg-Lille: Dumarka ciyaartoyda labada kooxood ku sawira
Concert 25 Shaqo Sanadeedka Sicirka Bill: Wasiirka Isboortiga ee "Motion" ...
Is-diiwaangalinta halkan si aad u hesho wararkii ugu dambeeyay, cusbooneysiinta iyo bixinnada khaaska ah ee toos loogu soo diro boostada.
Waad ka joojin kartaa wakhti kasta